turmeric – Healthy Life Journal
All posts tagged "turmeric"
ဟင်းလျာထဲ နနွင်းမှုန့်ထည့်ချက်ရင် ဘာကောင်းကျိုးရှိသလဲ
(၁) ရောင်ရမ်းမှုမဖြစ်အောင် ဟန့်တားပေးပါတယ်။ (၂) ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၃) စိတ်ကျရောဂါ လျော့ကျစေပါတယ်။ (၄) ကိုယ်ခံအားစနစ် မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၅) သွေးတွင်းကိုလက်စထရောအဆင့် လျော့ကျစေပါတယ်။ (၆) ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (၇) အစာကြေညက်စေပါတယ်။ (၈) ဆီးချိုရောဂါ...
နနွင်းမှုန့်၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၁ ရပ်
———၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊——— (၁) ရောင်ရမ်းမှုကို ကာကွယ်ဟန့်တားပေးပါတယ်။ (၂) ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၃) စိတ်ဓာတ်ကျတာကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ (၄) ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၅) သွေးတွင်းကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ (၆) ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (၇)...
မေ့တတ်လွန်းနေရင် နေ့စဉ် နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်စားပါ
မကြာခဏ မေ့တတ်နေရင်၊ သာမန်မေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား မေ့တတ်လွန်းနေရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်စားပေးပါ။ နနွင်းမှုန့်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကာကူမင်ဓာတ်က မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစေပြီး သက်ကြီးသတိမေ့ရောဂါ၊ သူငယ်ပြန်ရောဂါနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ်...
နနွင်းတွင်ပါသော ကာကူမင်ကြောင့် သွေးကင်ဆာအနိုင်ယူခဲ့သည့်အမျိုးသမီး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် ဒီနက်ခ်ခီဖာဂူဆန် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က သွေးကင်ဆာရောဂါ ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းမှု ၃ ကြိမ်၊ ပင်မဆဲလ်အစားထိုးမှု ၄ ကြိမ်ပြုလုပ်ကာ ကုသမှုခဲ့ယူခဲ့ပါတယ်။...
အသားအရေအတွက် နနွင်းမှုန့် အစွမ်း
၊ လရိပ်မေ ၊ နနွင်းမှုန့်မှာ အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတဲ့အပြင် အသားအရေပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ – နေလောင်ဒဏ် သက်သာစေခြင်း နနွင်းမှုန့်ဟာ နေပူဒဏ်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားထိခိုက်မှုနဲ့ အရေပြားအရောင် ညစ်နွမ်းမွဲခြောက်မှုတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။ – ၀က်ခြံပျောက်စေခြင်း နနွင်းမှုန့်ဟာ အရေပြားရှိ...
တစ်လအတွင်း အရွယ်တင်နုပျိုသွားစေမည့် နနွင်းပျားရည်ပေါင်းတင်နည်း
ငွေကြယ်စင်ယံ၊ ဒီပေါင်းတင်နည်းက ကျွန်မကိုယ်တိုင်လက် တွေ့အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်လည်းမခက်ပါဘူး။ အိမ်မှာနနွင်းမှုန့်၊ ပျားရည်နဲ့ သကြားရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် ပေါင်းတင်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ – နနွင်းမှုန့် (ဆနွင်းမှုန့်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်) – ပျားရည်(ပျားရည်စစ်စစ်ရရင်ပိုကောင်းပါတယ်) – သကြား ပြုလုပ်နည်း...
နနွင်းအကြောင်း သိချင်တယ် …
မေး. နနွင်းအကြောင်း သိချင်လို့ပါရှင်။ နနွင်းဆေးပြားကိုသောက်တာက အစာအိမ်ရောင်ရောဂါနဲ့ တည့်ပါသလားရှင်။ နနွင်းသောက်ခြင်းကြောင့် ပျောက်ကင်းတဲ့ရောဂါတွေနဲ့ နနွင်းနဲ့ မတည့်တဲ့ရောဂါတွေကိုလည်း သိပါရစေရှင်။ အိမြတ်မွန်(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနတွေအရ နနွင်းဟာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကို သက်သာစေပြီး အယ်ဇိုင်းမားရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။...